Mahita ny fahafahana any am-ponja
"Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin’ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Romana 5:6 Koa raha ny Zanaka (ny Zanak’Andriamanitra) no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo." Jaona 8:36
-«Voahidy ato am-ponja aho no mahita ny fahafahana. Rehefa milamina ny saiko, ao anaty fanginana, dia hitako ireo fahadisoako, ary manenina mafy aho… Mahafinaritra ny fiainana ary midadasika, noho Ilay Andriamanitra Ray. Indraindray izany dia toa mavesatra, toa tsy azo iainana, saingy tokony hitodika amin’Andriamanitra isika, amin’ny alalan’i Jesosy Zanany, mba hahazo ny fanalahidin’ny zava-miafin’ny Fiainana. Hoderaina mandrakizay anie Andriamanitra!» (Gilles)
-«Ankehitriny Kristy efa naneho ny tenany tamiko, efa noraisiko ho ao am-poko sy ho eo amin’ny fiainako, ka te hanjary olona vaovao sy madio aho. Takatro ny hafatr’i Jesosy, dia fitiavana, fiadanana, famelan-keloka. Mbola taona maro no hijanonako ato am-ponja, kanefa fantatro fa Jesosy irery ihany no afaka manasitrana sy manova ilay izaho taloha, izay nanao zavatra tena ratsy. Ray ô, misaotra Anao aho nanome anay an’i Jesosy Zanakao, mba hitondra ny fahotanay. Ry Tompo Jesosy ô, sokafako ho Anao ny varavaran’ny foko, ka raisiko Ianao ho Mpamonjiko.» (Sylvain)
-«Aleo aty; am-ponja, miaraka amin’Andriamanitra, toy izay any ivelany, nefa tsy manana Azy! Tsy fantatro izay tian’Andriamanitra hitondrana ny fiainako. Tsy ny fanafahana ahy ho any ivelany ihany no zava-dehibe, fa koa ny fanafahana ahy ato anaty. Tokony ho vonona ho amin’ny zava-drehetra aho: ho amin’ny fanafahana, na ho amin’ny figadrana mandra-pahafaty. Saingy efa olona afaka aho, ato anatin’ny foko.» (Roger)
Ireo fanambarana nataon’olona migadra ireo dia porofon’ny fahasoavan’Ilay Andriamanitra fitiavana, Izay hany mamela heloka ny mpanota. Andriamanitra dia masina, kanefa mamela ny olona meloka izay mitodika amin’i Kristy, Ilay nitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazofijaliana.